के क्यान्सर रोगको उपचार नेपालमै सम्भव छ ?: डा. सोनिया दुलालको लेख – Clickmandu
के क्यान्सर रोगको उपचार नेपालमै सम्भव छ ?: डा. सोनिया दुलालको लेख
डा. सोनिया दुलाल, बरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ २०७६ फागुन २७ गते १६:२२ मा प्रकाशित
हाम्रो शरीरमा हुने कोषहरु नियमित रुपमा बढ्छन् । बढेपछि एक चरणमा गएर ती कोषहरुको मृत्यु हुन्छ र फेरि जन्म हुन्छ । यो क्रम चलि रहन्छ ।
कुनै कोष अनियन्त्रित रुपमा बढ्यो, निश्चित समयमा त्यसको मृत्यु भएन भनेर अनियन्त्रित रुपमा बढेको बढ्यै भयो भने त्यो विस्तारै रगतमा पुग्छ । रगतहुँदै शरीरका अन्य भागमा पुग्छ र असर पुर्याउछ । त्यसलाई क्यान्सर भनिन्छ । क्यान्सर फैलिने र नफैलिने गरी २ प्रकारका हुन्छन ।
क्यान्सरको कारण ?
क्यान्सरले उमेर, वर्ग केही पनि हेर्दैन । धुम्रपान, मादक पदार्थ सेवन मात्र नभइ, बढ्दो उमेर, बदलिदो जीवनशैली, वंशाणुगत, जेनेटिक म्युटेसन ‘जिनमा परिवर्तन’ रसायन, विकिरण, प्रदुषण, सक्रमण, मोटोपनआदि पनि क्यान्सर रोगका कारक तत्व हुन ।
संक्रमण ले कसरी गराउँछ क्यान्सर ?
महिलामा पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सर संक्रमणको कारणले हुन्छ । ह्युमन् प्यापिलोमा भाईरस (एचपीभी) यसको कारण हो । यस भाइरसको संक्रमणले नाक, कान, घाँटीको क्यान्सर पनि गराउन सक्दछ । त्यस्तै एच पाइलोरी नामक ब्याक्टेरियाले पेटको क्यान्सर गराउन मद्दत गर्दछ ।
हेपाटाइटिस ‘बी’ र ‘सी’ नामक भाइरसले लामो समयको संक्रमणपछि कलेजोको क्यान्सर गराउन सक्छ । त्यस्तै एच. आई. भी. भाइरसको पनि विशेषतः रगत र ग्रन्थिको क्यान्सरसँग सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।
रोग लाग्नुभन्दा लाग्न नदिनु नै समाधान को मूल उद्देश्य हो । कतिपय क्यान्सर रोगको लक्षण थाहा हुनु अगाडि नै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
जस्तै ४० वर्ष कटेका महिलाहरुले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार आफ्नो स्तनको जाँच गरे समयमै रोगको पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तै, पाठेघरको मुखको क्यान्सर सम्बन्धी विभिन्न स्वास्थ्य शिविरहरु भइरहेका छन् ।
चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम पाठेघरको मुखको साधारण जाँच गराइ रोगको पहिचान गर्न सकिन्छ । आहिले त पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जोगिन एचपीभी भ्याक्सिन पनि आएको छ । कुन उमेरमा लगाउँदा फाइदा हुन्छ भनेर चिकित्सकको परामर्श लिन आवश्यक रहन्छ ।
एउटै परिवारमा क्यान्सर रोगका धेरै जना व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, कतै त्यो वंशाणुगत पो होकी भनेर पनि ठम्याउन जरुरी हुन्छ र अन्य सदस्यलाई क्यान्सर हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । त्यस्तै ५० वर्ष नाघेपछि सामान्य व्यक्तिले पनि ठूलो आन्द्राको जाँच गराएर ढुक्क हुन सकिन्छ ।
शुरुकै अवस्थामा क्यान्सर रोगको पहिचान गर्न सके यो रोग निको हुन्छ । त्यस्तै रोग अन्तिम चरणमा पुगेता पनि कतिपय क्यान्सर रोगलाई विभिन्न उपचार पद्धतिद्वारा सुगर, प्रेसर जस्तै लामो समयसम्म नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ ।
२. किमोथेरापी (खाने चक्की अथवा सुईबाट दिन सकिने)
३. रेडियोथेरापी (विकिरणद्वारा गरिने)
४. हर्माेनल थेरापी
५. टार्गेटेड (चक्की वा सुइ द्धारा)
६. इम्युनो थेरापी
७. मेट्रोनोमिक थेरापी
नेपालमा अहिले क्यान्सरको बिरामीलाई १ लाख रुपैयाँको सहुलियत दिइएको छ । रोगको प्रकार र चरण हेरेर कुनै रोगलाई यसै सहुलियतले आरामले पुग्न सक्छ भने कुनैलाई नपुग्न पनि सक्छ ।
कुनै कुनै विदेशमा आती महंगो पर्ने औषधि नेपालमा निःशुल्क पनि पाइन्छ । त्यसैले, उपचारका लागि विदेश धाइराख्न आवश्यक छैन । नेपालमा नपाइने औषधि विदेशबाट मगाएर पनि यतै गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा कुन–कुन उपचार सम्भव छ ?
प्रायः सम्पूर्ण उपचार पद्दतिहरु नेपालमै सम्भव छ । क्यान्सर रोगको पहिचान गर्ने पद्दतिदेखि उपचार पद्धतिहरु प्रायः सबै नेपालमा सम्भव छ । दक्ष चिकित्सकहरु पनि छौं ।
तसर्थ, विदेशमा उपचारका लागि जानु अघि एकपटक नेपालकै दक्ष चिकित्सकको सल्लाह लिएको राम्रो हो । नेपालमा यदि कुनै उपचार पद्दति नरहेको खण्डमा हामी आफैपनि बिरामीलाई के गर्दा र कता जाँदा राम्रो हुन्छ निर्देशन दिन सक्छौ । यसले बिरामीको समय र पैसा दुवै जोगाउन मद्दत गर्दछ ।
(डीएम मेडिकल अंकोलोजिष्ट ‘वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ’ डा. सोनिया दुलालको बिचार, हाल वीर अस्पतालमा कार्यरत छिन । दुलालले बरिष्ठ मेडिकल अन्कोलोजिस्ट प्रा. डा. विष्णुुदत्त पौडेल र हाल अमेरिकामा रहेका प्रा. डा. प्रकाश न्यौपानेको नेतृत्वमा काठमाडौंको न्याम्स, बीर अस्पतालबाट डीएम मेडिकल अंकोलोजिको अध्ययन पूरा गरेकी हु्न् । )